Quba qabduu laataa? -
Quba qabduu laataa?
bilisummaa May 21, 2013	Leave a comment
Waa’ee og-barruulee Afaan Oromoo akka burqaa gola Oromiyaa mara keessaa finiinaa jiraanii? Yaadaafi hirmaannaa keessaniif galata guddaa qabna. These are among the books of Afan Oromo available on the market. Your comments are required and we are grateful for them! To all Oromia land and Oromo people, we love you much! U?
Tags hogbarruu Kitaabaa
Previous SBOn, Sagalee Ummata Oromooti!
Next Baha Oromiyaa; Aanaa Mulluqee mayyuuti namooni kuma heddutti lakkaawan lafa saanirraa buqqifaman